उदास पशुपतिनाथ ~ brazesh
September 19, 2009 नेपाली, बायाँ फन्को, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
अचेल यस्तो लाग्न थ्ाालेको छ, मानौँ सारा संसार र यसको गति उल्टोतिर घुम्दै छ र हामीचाहिँ ढुंगे युगतिर फर्किरहेका छौँ । त्यसैले होला, अचेल कोही कुटिएको कुरा सुन्दा अचम्म लाग्न छाडिसक्यो मानिसहरूलाई । सानोभन्दा सानो कुरामा पनि एउटा मान्छेमाथि अर्को जाइलाग्न थालेका छन् । उपचार गर्दा सफल भएन भनेर डाक्टर कुटिन्छन्, विद्यार्थी फेल भयो भनेर शिक्षक कुटिन्छन्, कार्यकर्ताले नेता कुट्छन्, कर्मचारीले हाकिम ।
हामी किन यति हिंस्रक हुन थालेका हौँ भनेर सोचिरहेका बेला समाचारमा पढ्न पाइयो, पशुपतिनाथका पुजारीहरू पनि कुटिए रे ! फेर िकेही दिन त्यहाँ तनाव व्याप्त भयो अनि सुरक्षाकर्मीहरूको बन्दुकको घेरामा पशुपतिनाथको नित्य पूजा गर्न पुजारीहरू हिँडिरहेका फोटो पनि पत्रिकामा देख्न पाइयो । त्यो फोटोमा आजको हाम्रो वास्तविकता र आममान्छेको लाचारी स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो । आज पशुपतिनाथको पूजा बन्दुकको घेरामा हुनुपर्ने स्िथति आयो, भोलि गएर डाक्टरले बन्दुकको घेरामा उपचार गर्ने, बालबालिकाहरूले बन्दुकको घेरामा स्कुल पढ्ने अनि सबैले सबै काम बन्दुक लिएर गर्नुपर्ने स्िथति नआउला भन्ने के छ र ? युगौँदेखि शान्ति र संयमको अभ्यास गररिहेका नेपालीहरू कति छिटो बन्दुक र त्यसको तागतमा भर नपरी नहुने भएछौँ भन्ने अत्यासलाग्दो सन्देश हुन्, यस्ता घटनाहरू ।
हुन त यो पंक्तिकार नियमित रूपमा पशुपतिनाथ जाने मान्छे त होइन । तर, हालसालै त्यहाँ जेजस्ता घटना भए, नरमाइलो लाग्यो । अनि, एकपटक पशुपतिनाथको मन्दिर पुग्नैपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यसैले एक साँझ सपरविार पशुपतितिर लागियो ।
त्यस साँझ पार्किङ्बाट मन्दिरतिर बढ्दै जाँदा नै एउटा अचम्मको सुनसान देखियो । सधैँभर िहामीले जुत्ता-चप्पल फुकाल्ने ठाउँमा बस्ने फूलप्रसादका एक जना हँसिला व्यापारी त्यहाँ थिएनन् । जतिजति मन्दिर परसिरको नजिक पुग्यौँ, त्यति नै कस्तो कस्तो असहज लाग्न थाल्यो वातावरण । सायद केही दिनअघि त्यहाँ भएको मारपिटका कारण सबै जना अलि सतर्क, स्तब्ध र निराश भएकाले पो हो कि ? अनुमान लगाइयो । फूलामाला बेच्नेहरू पनि निकै कम मात्र थिए । भएकाहरू पनि आशंकित देखिन्थे । सुरक्षाकर्मीहरू बन्दुक बोकेर यत्र तत्र झुन्डझुन्डमा तैनाथ थिए । दर्शनार्थीहरू त छैनन् नै भन्न मिल्थ्यो । विशेष गरी साँझपख आरतीको बेला त कस्तो चहलपहल हुने गथ्र्यो ! अनिकालमा बीउ जोगाउनु, हूलमूलमा जीउ जोगाउनु भनेर त्यहाँ हुनसक्ने अर्को मारपिटको डरले पो सायद कोही नआएका हुन् कि भन्ने लख हामीले काट्यौँ ।
आर्यघाटको पारपिट्ट िआरती गर्दै भजन गर्नेहरू पनि देखिएनन् । नित्यपूजा नभएको दुई-तीन दिन भइसकेको थियो सायद । पहिले चार ढोका खुलेका हुन्थे, घन्टी र थरीथरी मान्छेहरू एक स्वर मिलाएर गाउन खोजिरहेका भजनको कोरसले भित्रसम्म अनौठो शान्तिको आभास हुन्थ्यो । तर, त्यस दिन त्यो केही थिएन । एउटा मात्र ढोका खुलेको थियो र दुई जना तन्नेरी भण्डारीहरू जल र चन्दन बाँड्दै थिए । केही सामान्य भारतीय तीर्थयात्रीहरू मात्र दर्शन गर्न आएका थिए । हिसाबले त धक्कामुक्का नगरी सजिलोसँग दर्शन गर्न पाएकामा रमाइलो लाग्नुपर्ने हो तर बोझिलो भयो मन ।
शिवलिंगमा महादेवको अनुहार सधँैको जस्तै नै थियो । ढुंगामा कुँदिएको आकृतिको भावभंगिमा हुन त जहिले पनि त्यस्तै न हो ! ढुंगालाई ईश्वर बनाउने त मान्छेको आस्थाले हो, विश्वासले हो । तर, त्यस दिन मलाई महादेवको पत्थरको अनुहार पनि उदासजस्तो लाग्यो । एक्लै झोक्राएर बसेका जस्ता लागे पशुपतिनाथ । वाक्कदिक्क भएका जस्ता थिए उनी । मानौँ एउटा प्रश्न थियो उनको आँखामा, 'मैले तिमीहरूको रक्षा धेरै समयसम्म गरेँ तर अब मेरो रक्षा कसले गर्छ ?'
मान्छेलाई आफू सर्वोपर िहोइन, आफूभन्दा माथि पनि एउटा शक्ति छ भन्ने कुरा बेलाबेला घनले टाउकोमा ठोकेर घुसाइरहनुपर्छ । नत्र मान्छे देउता बन्न नसके पनि सजिलैसँग राक्षस बन्न सक्ने प्राणी हो । त्यसैले राक्षस नबन्नका लागि उसलाई एउटा विम्बको आवश्यकता हुन्छ । यो विशाल र अपरम्पार अनि ज्ञानको सीमाभन्दा बाहिरको प्रकृतिका निर्माता र नियन्त्रणकर्ता कुनै एउटा शक्तिका सामु मान्छे, उसका उपलब्धि, उसका पाखुराका बल वा उसको मगजभित्रको बुद्धि कति न्यून र गौण छ भन्ने कुरा उसलाई जताउने त्यो विम्ब मन्दिरभित्र स्थापित ३३ कोटि भगवान्मध्ये कुनै पनि एक हुनसक्छ । त्यो विम्ब चर्चभित्र रहेको हुनसक्छ, गुरुद्वाराभित्र हुनसक्छ वा मस्िजदभित्र हुनसक्छ ।
पुराणदेखि इतिहाससम्म र हिजोअस्ितकै हाम्रो वरपिर िखोतलेर हेर्ने हो भने त्यो शक्तिमा विश्वास नगर्ने, आफूभन्दा शक्तिशाली र विद्वान् कोही छैन भनेर दम्भ गर्ने, अरूको आस्थालाई अनादर गर्ने जो कसैको पनि ढिलोचाँडो पतन भएको छ, नास भएको छ । पशुपतिनाथको मन्दिर पनि त्यस्तै एउटा आस्थाको विम्ब हो । आफ्नो विश्वासबाहेक अरूका विश्वासलाई मिथ्या ठान्नु मूर्खहरूको मानवीय कमजोरी हो तर अरूका विश्वासलाई उखेलेरै फ्याल्छु भन्नेचाहिँ जानाजान आफूलाई विनाशको बाटोमा हिँडाउनु हो । राजनीतिका लागि कसैले पनि कसैको आस्था र विश्वासलाई अनादर गर्नु हुँदैन ।
सबैथोक कस्तो फरक भएको, सबैलाई कति फरक परेको भनेर हामी गन्थन गर्दै र्फकंदा हाम्री सानी छोरीले उसकी दिदीलाई हाँस्दै भनी, "सबैलाई कहाँ फरक परेको छ र ? बाँदरहरू र त्यो बूढो साँढे त पहिलेजस्तै छन् नि !"
त्यो बालसुलभ टिप्पणी सुनेर हाँस्दाहाँस्दै म गम्भीर भएँ । हो त नि, जनावर भनेको त विवेक नभएको प्राणी पो त ! त्यसैले तिनीहरूलाई नाराजुलुस र राजनीतिले केही पनि फरक पर्दैन । यी सब कुराहरू, स्वार्थ, शक्तिको लडाइँ र उपलब्धिको भोक भनेको त हामीजस्ता चेतनशील, विवेकशील मान्छेहरूले मात्र बुझ्ने कुराहरू हुन् । कतै हाम्रो दुःखको जड यही विवेक र चेत नै बनिरहेका त होइनन्, जसको गलत अर्थ लगाएर, गलत व्याख्या गरेर हामी मान्छे हुनुको भ्रममा बाँचिरहेका छौँ ।